Maxay ku xiran tahay guusha Ra'iisul Wasaare ROOBLE? - Caasimada Online
Home Warar Maxay ku xiran tahay guusha Ra’iisul Wasaare ROOBLE?
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, sidoo kalena mar soo noqday madaxweynihii Puntland Cabdiweli Maxaxmed Cali (Gaas) oo wareysi siiyey BBC-da ayaa markale ka hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan xiisadda u dhexeysa madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday iyo ra’iisul wasaaraha dalka.
Gaas ayaa nasiib darro ku tilmaamay go’aannada is diidan ee ka soo kala baxay labada dhinac, wuxuuna tilmaamay in labaduba ay iskala baxeen xeendaabka dowladnimada.
Sidoo kale wuxuu kuu taliyey in kiiska Ikraan Tahliil Faarax ee sida weyn la’isugu hayo loo daayo hay’adaha ku shaqada leh, gaar ahaan kuwa Cadaaladda.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in guusha Rooble ay kaliya ku jirto inuu dalka ka qabto doorasho xor iyo xalaal ah.
“Guushiisu iyo guul darradiisa waxay ku xiran tahay doorasho sax ah oo lagu kalsoon-yahay oo dadka Soomaaliyeed ay u wada riyaaqaan oo cadaalad ah in uu sameeyo. Guushiisa kuma xirna ka gun gaaridda kiiska Ikraan Tahliil,” ra’iisul wasaarihii hore ee dalka.
Waxa kale oo uu intaasi kusii daray “Waxaan oran lahaa gabadhan kiiskeeda haloo daayo hay’adaha cadaaladda madaxweynahana faraha ha kula baxo ra’iisul wasaaruhuna ha u jeesto qabashada doorashada,”.
Hadalkan ayaa ku soo aadayo, iyada oo haatan khilaafka u dhexeeya Farmaajo iyo Rooble uu gaaray meeshii ugu sarreysay, wuxuuna saameeyey doorashooyinka dalka ee 2021-ka.